Browsers များနှင့် Start pages - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Browsers များနှင့် Start pages
13-05-2010, 02:27 AM
Firefox ဖြစ်စေ - Google chrome ဖြစ်စေ - Internet explorer ဖြစ်စေ - ဘယ် Browser ကိုဖြစ်ဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ် လိုက်ချိန်မှာ ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ စတင်မြင်တွေ့ရမှာ - Browser ရဲ့ Start page ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ New tab ကို ဖွင့်တဲ့အချိန် မှာလည်း အမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရမှာ Browser ရဲ့ Start page ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Start page တစ်ခုရဲ့ အရေးပါမှုကို လူအတော်များများ သတိမထားမိကြပေမယ့် - ကွန်ပြူတာနဲ့ နေ့တိုင်း ထိတွေ့ပြီး အင်တာနက်မှာ သွားလာလုပ်ကိုင် နေကြမယ့် သူတွေအတွက် Start page တစ်ခုကို ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်လာအောင် ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲမလဲ - ဘယ်လို Start page မျိုးကို သုံးမလဲ ဆိုတာ - စာဖတ်သူအတွက် အသုံးပြုသင့်မယ့် Start Page တစ်ချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Browser တစ်ခု ( ဥပမာ - Firefox ဆိုကြပါစို့ ) ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ အသက်သွင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ users အတော်များများ က တင်ပြီးတဲ့အတိုင်း ပါလာတဲ့ Mozilla search ကိုပဲ start page အဖြစ်နဂိုအတိုင်း ထားရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သတိထားခဲ့မိသလောက် ၁၀၀ မှာ ၁၀ ယောက် အဲ့ဒီ့ Mozilla search ကို အသုံးပြုတာ မတွေ့ရပါဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်ကြပါသလဲ ?? Firefox ကိုဖွင့်တယ်။ Start page မှာတွေ့နေရတဲ့ Mozilla search ကို ကျော်ပြီး Address bar မှာ google ဆိုပြီးရိုက်တယ်။ Ctrl+enter လုပ်တယ်။ ဒါက Google user တိုင်း နေ့တိုင်းလုပ်နေကျ။ တစ်ချို့လည်း ထိုနည်း လည်းကောင်း - ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချင်တာ နေ့တိုင်းသုံးနေကျ Search engine တစ်ခု ( ဥပမာ - Google ) သို့တည်းမဟုတ် နေ့တိုင်းလည်ပတ် နေကျ Sites တွေကို Start page မှာ ဘာကြောင့် အရံသင့် အသုံးမပြုကြပါသလဲ။
နေ့တိုင်းလည်ပတ် နေကျ Sites တွေ ၊ နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေကျ Search engine တွေကို Start page မှာထားရှိထားခြင်း အားဖြင့် ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိသလဲ ??
ဟုတ်ကဲ့ - အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရရင် - Address bar မှာ Cursor ချပြီး နေ့တိုင်း ရိုက်နေကျ စာလုံးတွေ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ရိုက်နေဖို့ မလိုတော့ဘူး ၊ နေ့တိုင်း ကိုယ်သွားရောက်လည်ပတ်နေကျ Sites တွေ က ဘာတွေလဲ - သူတို့တွေ နာမည်က ဘာများပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ Cursor ချပြီး တွေဝေနေဖို့ မလိုတော့ဘူး ၊ ကိုယ့်အတွက် အသိပညာ - ဗဟုသုတ - သတင်း အချက်အလက် မျှဝေပေးနေတဲ့ Sites တွေရှိရာဆီ မပျက်မကွက် လည်ပတ်စေဖို့ သတိမမေ့စေတော့ဘူး ၊ လိုအပ်ချိန်တိုင်း မှာလည်း Click တစ်ချက် ပေးယုံနဲ့ သူ့တို့တွေဆီ သွားရောက်နိုင်မယ် - စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ စာဖတ်သူရဲ့ Browsers မှာ ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သလို Start page ကို စီမံ ခန့်ခွဲဖို့ မပြင်ဆင်ရသေးဘဲ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ခုအောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် Start pages တစ်ချို့ကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Browsers တွေမှာ about:---- နဲ့စပြီး နောက်မှာ စာလုံးတစ်ချို့လိုက်တာနဲ့ about: နောက်မှာ လိုက်တဲ့ စာလုံးရဲ့ အချက် အလက်ကို လိုက်ပြီး information အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ ( about: နောက်မှာ ဘယ်စာလုံးတွေ လိုက်ရင် ဘာတွေ ဖော်ပြမယ် ဆိုတာတော့ ဒီနေရာကနေ တစ်ဆင့် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ) about: နောက်မှာလိုက်တဲ့ universal code တွေထဲကမှ about:blank ဆိုတာ "Blank HTML document" တစ်ခုကို အစဉ်အမြဲ ဖော်ပြပေးတဲ့ code တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအလိုရှိရာ web စာမျက်နှာကို အလျင်အမြန် access လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း Start page တစ်ခုက မိမိအလိုမရှိတဲ့ web pages တစ်ခု ဖြစ်နေတာထက် Blank Page တစ်ခုဖြစ်နေတာ ပိုပြီး သင့်တော်တယ်မဟုတ်ပါလား။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ start page မြင်ကွင်းကို တစ်ခြား web စာမျက်နှာတွေ မြင်နေရတာထက် ရှင်းလင်းတဲ့ blank မြင်ကွင်းကို သဘောကျမယ် ဆိုရင်တော့ Firefox မှာ ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို Tools > Options ကနေ ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Fav4 ကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ်။ သူ့ အပြင်အဆင်လေးက ရိုးရှင်းတယ်။ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ ၊ သွားနေကျ နေရာတွေကို သူဖော်ပြထားတဲ့ icons လေးတွေကနေ click တစ်ချက်ပေးယုံနဲ့ အဆင်သင့် ရောက်နိုင်တယ်။ ပုံမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း သုံးနေကျ Facebook, Flickr, Gmail, Twitter အားလုံးကို အဆင်သင့်ရောက်နိုင်အောင် သူပြင်ဆင်ပေးထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က သူပေးထားတာတွေ သဘောမကျဘူး ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း icons တစ်ခု ချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Customize ကနေ ပြင်ဆင်ယူလို့ ရသလို -
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ညာဘက် အောက်ထောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ site settings ကနေ တစ်ဆင့် click ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင်လည်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို စာမျက်နှာ တစ်ခု ပေါ်လာပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ သွားရောက်လည်ပတ်နေကျ အသုံးပြုနေကျ Sites တွေရဲ့ icons တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် နမူနာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ start page ပါ။
သူ့မှာ ကန့်သတ်ချက်တော့ ရှိပါတယ်။ အဲတာက မိမိနှစ်သက်ရာ sites (4) ခုကိုပဲ ရွေးချယ်ဖို့ ခွင့်ပြုတာပါ။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ Sites (4) ခုထက်မက သွားလာလေ့ ရှိသူ - Websites အဝင်အထွက်များတဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ start page မှာ ဒီ့ထက် icons ပိုများများ ထားရှိနိုင်မှ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ fav4.org ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အဲတာပါပဲ။ ကျွန်တော် ဒီ sites (4) ခုပဲ ခွင့်ပြုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်ဖို့ suggest လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ ထူးခြား မလာခဲ့သေးပါဘူး။
iGoogle / Google
Google နဲ့ iGoogle ကလည်း start page အတွက် ထားရှိမယ် ဆိုရင် မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဆိုရရင် Google ကို start page အနေနဲ့ ထားတဲ့ အခါ အင်တာနက်ထဲမှာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို မိမိရှာဖွေချင်လို့ Browser ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ Address bar ကနေ Google ကိုရိုက်ခေါ်စရာမလိုပဲ Google ကို အရံသင့်တန်းမြင်ရပြီး အလိုရှိရာကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iGoogle မှာလည်း ဆိုရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ သူကတော့ Google ထက် ပိုပြီး စုံလင်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာ iGoogle page တစ်ခု ဖန်တီးထားပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Weather ကစလို့ ၊ ကိုယ့် Gmail ထဲက စာအဝင်အထွက်တွေ အပြင် ၊ မိမိနှစ်သက်ရာ သတင်း Websites တွေက တက်လာတဲ့ updates သတင်းတွေ အဆုံး တစ်ပြိုင်နက် iGoogle ကနေ မြင်တွေ့နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ iGoogle စာမျက်နှာတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကနေမှ တဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Users တွေ အာရုံစိုက်မိလာတဲ့ Search engine တစ်ခုပါ။ လှပတဲ့ Background ၊ သေသပ်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ သူ့ကိုများ Start page နေရာမှာ ထားမိလိုက်မယ်ဆိုရင် Bing Home Page ကို ဝင်လိုက်မိတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေ အမြဲဆန်းသစ်မှု တစ်ခုခုကို ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် မိသားစုများ ယုံနိုင်ကြပါ့မလား - ကျွန်တော်က Google user ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး။ Search engine ထဲမှာ ဆို Google ကိုပိုသဘောကျမိပေမယ့် အပြင်အဆင်နဲ့ images search မှာတော့ Bing ကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ ကျွန်တော် သဘောကျမိတာတော့ Wolfram|Alpha ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Search engine တစ်ခု အနေနဲ့ တော့ သုံးဖို့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့ အချက်အလက်ပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သတ်မယ် ဆိုရင်တော့ သူရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေက အံ့သြဖို့ ကောင်းလောက်အောင် အသေးစိတ်တာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ Wolfram|Alpha နဂိုမူလပုံစံက ကျွန်တော် ဖော်ပြထားသလို မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က Wolfram|Alpha ကိုမှ Theme ပြောင်းပေးထားတာပါ။ သူ့ရဲ့ Theme ကို ပြင်ဆင်ပေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားရောက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သူဖော်ပြထားတဲ့ icon ကို Toolbar ရှိရာဆီ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Drag ဆွဲယူပြီး နောက်အလိုရှိချိန်မှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
Chrome New Tab / Opera Speed Dial / Speed Dial for Firefox
ကျွန်တော် နောက်တစ်ခု အကြံပြုချင်တာကတော့ "speed dial" ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Start page သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက ကိုယ်သွားရောက် လည်ပတ်နေကျ နေရာတွေကို tab bar အသစ်တစ်ခု ဖွင့်တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ သွားရောက်လည်ပတ် လို့ ရအောင် Thumbnail အနေနဲ့ လှလှပပ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို Thumbnail "speed dial" တစ်ခုကို start pages မှာ စီစဉ်ထားခြင်း အားဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နေကျ နေရာတိုင်းဆီ address bar မှာ တစ်ခုချင်းစီ typing လုပ်ပြီးသွားရောက် နေဖို့မလွယ်ပဲ အချိန်ကုန် သက်သာစွာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ webpages တွေကို အလွယ်တကူ access လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Chrome ၊ Opera နဲ့ Firefox အတွက် သက်ဆိုင်ရာအလိုက် Speed dial တွေကို ရယူနိုင်မယ့် Links တွေကို အောက်မှာ ကျွန်တော် သီးသန့်စီ ထပ်မံ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ မိမိနှစ်သက်ရာ websites ရှိရာဆီ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်ဆန်တိကျတဲ့ Start pages တွေက တဆင့် ကူးသန်းသွားလာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ....
Last edited by KznT; 04-02-2011 at 12:36 AM..
ဆန်းမောင်, မင်းခကို, လွင်မောင်အေး, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, amaung344, bonge, eiei, g00gle, hellboy, htun30, ko myo, minthike, openeyes, sAnDViper, tu tu, zo
18-01-2011, 05:47 PM
ပြန်စာ - Browsers များနှင့် Start pages
ထပ်ပြီးတော့ အားဖြည့်ပါရစေဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ start pages ကို Mozilla firefox မှာ fast dial ကို သုံးတယ်ခင်ဗျာ။ သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ add ရတာလည်း လွယ်တယ်လေ။ ရောက်နေတဲ့ current page ပေါ်မှာ right click ထောက်၊ ပြီးလျှင် Add to fast dial ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် ပြီးသွားရော။ နဂိုပေးထားတာက tab9ခု ပေးထားတာ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် ထပ် add ချင်လည်း ရသေးတယ်။ ကျွန်တော် သုံးထားတာ ကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
fast dial add-ons အသုံးပြုပုံလေးကတော့ မထူးခြားပါဘူး။ အရင်ဦးဆုံး fast dial add-ons page ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ အဲဒီ page မှာ add to firefox ကို နှိပ်လိုက်ရင် သူဟာသူ automatic loading လုပ်ပါလေ့မယ်။ ပြီးလျှင် install။ ပြီးတာနဲ့ restart firefox ကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် install ပိုင်းပြီးသွားပါပြီ။ အခု start page မှာ current ဖြစ်ဖို့အတွက် MFirefox broswer ကနေ tools> Options> အဲဒီမှာ when firefox start page မှာ show in blank page ကိုရွေးလိုက်ပါ။ broswer ကနေ နောက်ထပ် new tablet ခေါ်ကြည့်ပါ။ fast dial ကို start page ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ fast dial မှာ မိမိထားချင်တဲ့ page တွေ add ချင်တဲ့ဆိုလျှင်တော့၊ add ချင်တဲ့ page တစ်ခုခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အဲဒီ page မှာ right click > add to fast dial ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ နောက်ထပ် page တွေလည်း အဲလိုပုံစံအတိုင်း add သွားလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ thetnaung87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
AZM, bonge, g00gle, jsmith201012, KznT, minthike, tu tu, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Browsers များနှင့် Start pages
ဒါကတော့ firefox 4.0 လေးပါ
free download နဲ့ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်
Last edited by လီယိုနာဒို; 10-05-2011 at 09:02 AM..
browser, how to, knowledge
How to speed up your Windows XP in natural ways ကိုပိုင် Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 28 10-09-2010 05:01 AM
Window Vista ရဲ့ Start Menu မှာ Run Box ထည့်ကြရအောင် .. LaMike ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ210-04-2009 10:42 AM